ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဟွန်ဒါခရောဇ့်ရုတ်များ | ဟွန်ဒါခရောဇ့်ရုတ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Silver Honda Crossroad 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Black Honda Crossroad 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Honda Crossroad 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 283 ညှိနှိုင်း
အက်စ်ယူဗီကားတွေထဲက ဟွန်ဒါ ခရောရိုတ်များ
ဟွန်ဒါ ခရော့ရိုတ် တွေဟာ အက်စ်ယူဗီပုံစံရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ဌင်းမှာ ပုံသဏ္ဍာန် နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဗြိတိန်ရဲ့ နာမည်ကြီး ဘရန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လန်ရိုဗာ တံဆိပ်ထဲက ဒစ်ကာဗာ စီးရီးတွေကို တံဆိပ် ပြန်ကပ်ထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ လုံးဝ ကွဲပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းမော်ဒယ်တွေကိုတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပ ကားဘရန်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာတော့ အစီးရေ သိပ်မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဟွန်ဒါသည် အက်စ်ယူဗီ တံဆိပ်တွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျော်ကြားလာတာကို တွေ့ရဟန်ရှိသောအခါ ခရော့ရိုတ်တွေကို တံဆပ်ပြန်ကပ်ပြီး ဈေးကွက်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို အတွက် ဟွန်ဒါ လန်ရိုဗာဆီကနေပြီး လန်ရိုဗာ ဒစ်ကာဗာ စီးရီးတွေကို ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ ဘီအမ်ဒဗလျူဟာ လန်ရိုဗာကို မ၀ယ်ခင် ဟွန်ဒါဟာ လန်ရိုဗာရဲ့ ဒစ်ကာဗာကားတွေကို ဂျပန်ရဲ့ အက်စ်ယူဗီ မားကတ်မှာ ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲက တစ်ချို့တွေကိုတော့ နယူးဇီလန်မှာ ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်.
၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၀ ထိ ထုတ်တဲ့ ဟွန်ဒါ ခရော့ရိုတ်တွေက မီနီ အက်ယူဗီတွေ ဖြစ်ပြီး တံခါးလေးပေါက်ပါ အက်စ်ယူဗီရဲ့ ကိုယ်ထည်ပုံစံထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းတွေလည်း ထွက်ပါတယ်။ အင်ဂျင်မှာ ဓာတ်ဆီ နဲ့ အော်တိုဂီယာတွေကိုပဲ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် အ၇ွှယ်အစား မောင်းနှင်မှု အားအရ ၁၈၀၀ စီစီ နဲ့ ၂၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ရိုဗာရဲ့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်တဲ့ ဒစ်ကာဗာရီ ဖိုး မော်ဒယ်တွေမှာကတော့ အင်ဂျင်က ၂၇၀၀ စီစီ၊ ၃၀၀၀ စီစီ၊ နဲ့ ၅၀၀၀ စီစီထိကို ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဌင်းမှာကတော့ မန်နျူးယယ် ဂီယာတွေကိုပါ ရနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၉ စတဲ့ ခုနှစ်တွေမှာ တွေ့ရမဲ့ ဟွန်ဒါ ခရော့ရိုတ်တွေရဲ့အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းကတော့ ကားက လေးထောင့်ကျပြီး အပြားပုံသဏ္ဍာန် အနည်းငယ်ကျပါတယ်။ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားပြီး ဟွန်ဒါရဲ့ တံဆိပ်ကို လန်ရိုဗာကားတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ပရိုဗောက်နဲ့တောင် ဆင်တူပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အကြမ်းထည်ဖြစ်တဲ့ကားတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး အနောက်ဖက်က လေးထောင့်ပိတ်ပုံစုံနဲ့ကားဖင်ကို ပိတ်ထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းမှာတော့ ထိုင်ခုံကို သုံးတန်းထားပေးထားပြီး အနည်းဆုံး လူ (၇) ယောက်လောက်တော့ ထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်က ထိုင်ခုံတွေကို ပစ္စည်းတင်လိုတဲ့ အချိန်တွေမှာ ခေါက်ချိုးထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာ ဘောက်စ်တွေကိုတော့ ကားဒတ်ရ်ှဘုတ်ပေါ်မှာ ထားရှိပေးထားပါတယ်။
အင်ဂျင်ရုန်းအားကောင်းပြီးဒီဇိုင်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ မီနီ အက်စ်ယူဗီတွေ ဖြစ်ပြီး ပါဝါလောက်ခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ လုံခြုံမှုအတွက် လေအိတ်များ၊ အန်တီလောက်ခ့် ဘရိတ်များ၊ မြုခွဲမီးလုံးများနဲ့ အသံပိုင်း စနစ်တွေကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တပ်ဆင်ထားပြီး တံခါး သုတ်တံများ၊ နဲ့ ပါဝါ ထိုင်ခုံတွေကိုလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လန်ရိုဗာ အနွယ်ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒါ ခရောစ်ရိုတ်တွေဟာ ဈေးနှုန်းမှာ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လောက်က စတင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၂၅၀ လောက်ကနေ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လောက်ထိ နီးပါးရှိနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ ခရော့ရိုတ်တွေမှာ အင်ဂျင် အရွယ်အစားတွင် လိုက်ထရပ်တွေရဲ့ အင်ဂျင် အ၇ွှယ်အစားနဲ့ တူညီစွာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အက်စ်ယူဗီထဲမှာမှ ထိုင်ခုံ (၃) တန်းနဲ့ ဒီဇိုင်းရိုးရိုးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်တာကိုတော့ သိထားပြီး ၀ယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။